Raim-pianakaviana saika hamoy fo noho ny tsy fananam-bola hitsaboana an-janany • L'Express de Madagascar
Raim-pianakaviana saika hamoy fo noho ny tsy fananam-bola hitsaboana an-janany
Lahitokana ny aina. Manao izay fomba rehetra namonjena an-janany amin’ny aretina nitarika tsy fahasalamana Ramoravelo Nicolas, raim-pianakaviana avy any Ankazobe. Voatery nampiakarina aty an-drenivohitra manaraka fitsaboana akaiky ny zanany lahy fahefatra, izay vao fito taona monja. Vola tsy toko tsy forohana no efa lany tamin’ny fitsaboana.
Amin’ity herinandro ity, no voatondro hiatrehan’i Fanomezantsoa Eugène fandidiana. Voalaza fa misy rano ny lohany ary mibontsina noho io rano io. Vola manodidina ny enina hetsy ariary no hiatrehana ny fandidiana. Mila fitaovana kely, izay mitentina roa hetsy sy iray tapitrisa ariary ihany koa hatsofoka sy hampidirina ao amin’ ny lohany. Kivy ary mila ho ketraka ny raim-pianakaviana mieritreritra sy mandinika ireo volabe ilaina maika amin’ny fanavotana ny ain-janany. Efa nisy mihitsy ny fotoana nahakivy azy tanteraka ary efa saika nitondra an-janany nody noho ny tsy fananana ireo volabe ilaina. Maniry mafy ny hiara-hody am-pifaliana amin-janany any an-tanàna, ankehitriny, Ramoravelo Nicolas. Mbola miankina tanteraka amin’ny fitsaboana, indrindra ny fandidiana hatao aminy anefa izany nofinofy izany.
Any Ampanikely, kaominina Andranomely fivondronan’Ankazobe no misy an-dRamoravelo Nicolas mianakavy. Mpamboly sy mpiompy no asan’izy mivady. Enina mianadahy no zanak’izy ireo, ka vao valo volana monja ny farany, raha 12 taona kosa ny lahimatoa. Zaza fahefatra i Fanomezantsoa Eugène. Tsy fantatra mazava ny antony tena niteraka ny tsy fahasalamana tampoka nahazo azy. Voalazan-dRamoravelo Nicolas fa tsy farary ary vao sambany no nitrangan’ aretina toy izao io zanany io. «Ny taona 2016 teo, nitaraina taminay fa maharary azy mafy ny lohany. Heverina ho toy ny aretina tsotra toy ny gripa, aretin’andoha,
harerahana, no nahazo azy. Tao anatin’ny iray volana, notsaboina tao an-trano tamin’ny alalan’ny fanafody efa mahazatra izy. Tsy nisy anefa ny fiovana ka teo izahay vao nikoropaka», hoy Ramoravelo Nicolas, Dadan’i Eugène mitantara ny nahazo an-janany tany
Nandeha ny fotoana sy ny andro, voalaza fa niha nitombo tsikelikely ny lohan’i Fanomezantsoa Eugène. Nanomboka nitarainany mafy io aretiny io. «Efa nahitana trangana lohan’ankizy miha lehibe toy ny nahazo azy tao an-tanànanay ary toy ny sitratsitrana teny ihany ny niafarany. Tsy nahatombina anefa izahay fa nanatona teny amin’ny CSBII nanao fizahana », manohy ny fitantarany, Ramoravelo Nicolas.
Nanahirana ny fitondrana ny marary niakatra tany amin’ny toerana fakàna taksiborosy. Dia an-tongotra natao nandritra ny ora enina no nodiavin’ ireo mpianakavy nitondra an’i Eugène. Notrotroina no fitondrana azy, izay tsy mitsahatra ny mitaraina eny an-dalana. Tsy vitsy amin’ny olona, indrindra ny Malagasy, ny fieritreretana zava-dratsy raha sendra mahitana na itrangana aretina hafahafa.
Toy izany ihany koa no nahazo an-dRamoravelo Nicolas.
« Noeritreretina ho nataon’olona na mosavy no nahazo an-janako. Tsy nanakana ahy tamin’ny fanatonana mpitsabo ihany anefa izany hahafantarana ny marina sy ny fitsaboana tokony hatao », hoy ilay raim-pianakaviana. Tsy vita tao amin’ny CSBII tany an-toerana ny fitsaboana an’i Eugène. Voatery nalefa nanatona hôpitaly ilay ankizilahikely. Teny amin’ny hôpitaly Bejofo Mahitsy no nitondrana azy voalohany, ny 15 janoary 2017 lasa teo. Noho ny fitombon’ny aretina dia nafindra teny amin’ny hôpitaly Befelatanana indray i Fanomezantsoa Eugène. Nitohy teny amin’ny hôpitaly Joseph Ravoahangy Andrianavalona (Hjra) izany ary eny ihany koa no voalaza fa hiatrehany ny fandidiana.
Efa tena kivy
Tamin’ny fizahana natao, toy ny radio sy ny «scanner», no nahafantarana fa misy rano ny lohan’i Fanomezantsoa Eugène ka izany no nahatonga ny fivontosana. Ny volana febroary teo, no efa nisy ny vinavina hiatrehan’i Fanomezantsoa Eugène ny fandidiana. Tamin’izany no efa fantatra ny teti-bidin’ilay fitaovana kely na «valve» ilaina sy hampiasaina aminy, izay mitentina roa hetsy sy iray tapitrisa ariary. Io fitaovana io no voalaza fa hampidirina ao aminy hitroka sy hamoaka ny rano ao amin’ny lohan’i Eugène. «Efa tafateny sy tapa-kevitra mihitsy aho tamin’izany fotoana izany fa hitondra an-janako hody. Tsy nanam-bola intsony
holaniana amin’ny fandidiana. Tsy tanteraka ny fandidiana tamin’ iny fotoana iny ka miandry ny « valve » hafa izay hovidiana amin’ ity herinandro ity indray izahay dia hiroso amin’ny fandidiana», araka ny fitantaran-dRamoravelo Nicolas hatrany.
Antony iray niteraka ny fahakivian’ity raim-pianakaviana ihany koa ny fahitany tranga iray tao amin’ny hôpitaly nisy azy ireo. «Nisy ankizy nanana aretina nitovitovy amin-janako ihany koa tafaraka efitra taminay. Efa niatrika fandidiana izy saingy mbola niverina toy ny mbola narary indray», hoy izy kivy.
Miezaka hatrany izy mivady mitady izay fomba rehetra hikarakarana ny menaky ny ainy, eny amin’ny hopitaly na eo aza ny fanampiana ataon’ny fianakaviana. Eo ihany koa ny fikambanana iray mikarakara ankizy sendra tsy fahasalamana ka miditra hôpitaly, toy ny mahazo an’i Eugène.
«Tsy nisy ny hoenti-manana tamin’ny fitsaboana indrindra ny fidirana hôpitaly. Voatery nivaro-pananana mihitsy izahay ka namidy ny omby roa sy kisoa maromaro ary ny tanimbary. Mitaiza kely ny vadiko satria vao valo volana monja ny zanakay farany.
Tsy afaka ny mijanona ela aty amin’ny hôpitaly izy noho izany. Tsy manan-kavana eto Antananarivo ihany koa izahay ka voatery mamonjy fodiana», hoy Ramoravelo Nicolas, malok’endrika, mitantara ny fotoan-tsarotra iainan’izy mianakavy eny amin’ny hôpitaly.
Ny fikambanana «Compassion Madagascar» no manampy sy mandray an-tanana ny fikarakarana an’i Eugène sy ireo ankizy vao teraka hatramin’ny 16 taona sendra tsy fahasalamana ka miditra hôpitaly. Ireo olona ao anatin’ny fahasahiranana sy tsy fananana amin’ny fiatrehana ny fitsaboana no tena sahanin’izy ireo. Ny laharana 032 92 297 60 sy ny 034 04 524 58 no ahafahana mandefa fanampiana na tolo-tanana ho an’i Fanomezantsoa Eugène.`
Arson Mahavatsy dit :
Olivier Rakotondrafara dit :
sambo fiara dit :
June Valeria dit :
Mr.Wilson dit :
HELEN BENJAMINE dit :
Josh Hawley dit :
Tsy maintsy hirefotra ny raharaha Antsakabary
Manano sarotra ny fanafarana akoholahy mpiady avy any ivelany